Banyere Anyị - Xiamen Frand Intelligent Equipment Co., Ltd.
Anyị bụ ndị akpaka ulo oru akụrụngwa ọkachamara nke na-agba ọsọ abụọ factory karịrị afọ 10. N'ime 60 patenti oru.
XIAMEN FRAND NTTRT EGO EGO CO., LTD nke dị na ala nke atọ, No.130 Building Jiapin Indutrial Park, Guan Kou Zhong Road, Jimei District, Xiamen Fujian, China.Ọ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ ruo afọ 15. Ọ bụ oge a na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ enterprise pụrụ iche na ahaziri nnyocha na mmepe nke elu-ọgwụgwụ nwere ọgụgụ isi zuru ezu tent nke akụrụngwa, ike factory akpaaka na ngwa nke ulo oru robot usoro. Ka ọ dị ugbu a, ọ nwere ntọala ntọala R&D anọ na ihe ikikere 60.Anyị ụlọ ọrụ tumadi na-ekpuchi ise isi ubi nke ọhụrụ ume, akpaaka akụkụ, nkenke ngwá electronic, ngwaike na mkpọchi ụlọ ọrụ, na ọgụgụ isi factory usoro. E zigala ngwa ọrụ ahụ na Germany, United States, Japan, Thailand, India, wdg.
French ọgụgụ isi akwara specializes na ahaziri nnyocha na mmepe nke elu-ọgwụgwụ nwere ọgụgụ isi zuru akụrụngwa, ike factory akpaaka na ngwa nke ulo oru robot usoro. O nwere nyocha anọ na mmepe mmepe yana ihe ikikere 60. Ikachasị imewe / mee nkenke nnyocha & nzukọ akụrụngwa - iji ọgụgụ isi ngagharị akara, ọhụụ & robotik. Anyị bụ otu n'ime ndị n'elu na-eweta nke akpaaka na akụrụngwa na akpaaka usoro ngwọta na China.Equifo edemede: 1.Hose mwekota akpaaka igwe 2.Buzzer nzukọ igwe 3.Carbureter nzukọ na ule igwe.
5. Mkpọchi isi nzukọ igwe 5. Relay nzukọ na ule igweNgwa igwe edemede: Akpaaka nzukọ akụkụ na-agụnye: carburetor / ọsọ agba anọ / anya akụkụ / Ikanam oriọna / ome uzu / piezoelectric Buzzer / rivet kọntaktị / ụlọ ọrụ mgba ọkụ / valvụ nozulu / magnetik latching agba anọ / inductance / ele mmadụ anya n'ihu / ọnụ ụzọ mkpọchi / mmalite-elu isi njikọ njikọ: eriri optic mmetụta / desktọọpụ nrapado igwe / vibration efere feeder / ulo oru ebu / auto-kpochidoro ịghasa igwe
sooks clamping igwe, abụghị kpara nkpuchi Ndinam igwe, abụghị kpara ihu nkpuchi Ndinam igwe, igwe nkpuchi ihu nkpuchi, ịwa ahụ nkpuchi Ndinam igwe, ịwa ahụ ihu nkpuchi Ndinam igwe,